Imaaraadka oo muddo dheer kaddib gargaar soo gaarsiiyey DF Somalia + Sawirro | Hadalsame Media
Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato ninkii…
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: AC Milan vs Sparta Prague 3-0, Royal Antwerp…
DAAWO: ”Khayrre ayaa la igu dacweeyey!” – Wasiiradda Caafimaadka oo kashiftay…
DEG DEG: Nin qudha ka jaray dad ku jirey kaniisadda ugu…
Japan oo badda ku daadinaysa biyo ay ka buuxaan kaah-fallo halis…
Home Arrimaha Caalamka Imaaraadka oo muddo dheer kaddib gargaar soo gaarsiiyey DF Somalia + Sawirro
Imaaraadka oo muddo dheer kaddib gargaar soo gaarsiiyey DF Somalia + Sawirro
(Muqdisho) 14 Abriil 2020 – Dowlada Imaaraatka Carabta, oo kaashaneysa hey’adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee (WHO), ayaa waxay Somaaliya u soo dirtay diyaarad gargaar oo sidda 27 tan oo ah Agab caafimaad oo lagula tacaalo cudurka Corona Virus.
Diyaaraddan ayaa sidday 7 tan oo gargaar ah oo ay Dowladda Imaaraadku ugu deeqday Soomaaliya, iyo 20 tan oo (WHO) uga deeqay Soomaaliya, iyadoo Agabkaan Caafimaad lagu wareejiyay Wasaaradda caafimaadka ee DFS.
Deeqdan ayaa waxa ay dowladda Somalia ka caawineysaa in ay qalabeyso goobaha lagu daweeyo dadka uu soo rito xanuunka Corona virus iyadoo sidoo kale u suura galin doonta shaqalaha cafimaadku iney si dardar leh ula tacaalaan cudurkan.
Safiirka dowladda Imaaraatka Carabta ee Soomaaliya Danjire Mohammed Ahmed Al-Othman Al Hammadi, ayaa sheegay in Dowladda Imaaraadku ay taageero buuxda la garab taagan tahay Dowladda iyo shacabka soomaaliyeed xilligaan adag si loo xoojiyo dadaallada looga hortagayo COVID-19.
Safiirku wuxuu intaas ku daray in Dowlada Imaaraadku, iyadoo la kaashaneysa hey’adaha caalfimaadka Dunida ee WHO, ay ka caawisay Dadl badan, iyada oo kaalmo deg deg ah gaarsiisay dalalkaas sidii ay u xoojiyaan dadaallada looga hortagayo COVID-19.
Deeqdaan ayaa kusoo aadeysa xilli ay Dowladda iyo shacabka Soomaliyeed ay u baahan yihiin in lagu garab istaago la tacaalidda cudurka Corona virus iyo xakameynta faafitaankiisa intaba.
DF Somalia iyo Imaaraadka ayaan sidaa iskugu fiicnayn sanadihii yaraa ee dambe, kaddib markii uu Imaaraadku la bareeray faragelin uu ku hayo arrimaha gudeed ee dalka.
Previous articleRAJO: Yurub oo bilaabaysa inay khafiifiso handaraabkii uu sababay Covid-19 & dalalka khafiifinaya+ Sawirro
Next articleRASMI: Shiinaha oo noqday dalkii 2-aad ee bilaaba tijaabada tallaalka Koroonaha oo….
Wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato ninkii dadka ku diley kaniisadda Nice
(Riyaad) 30 Okt 2020 - Sucuudi Careebiya ayaa qorshaynaysa in ay joojiso nidaamka "Kafaalada" kaasi oo dhigaya in shaqaalaha ajinabiga ee dalkaasi ku sugan...
DAAWO: ”Khayrre ayaa la igu dacweeyey!” – Wasiiradda Caafimaadka oo kashiftay mas’uuliyad darrada madax ka mid ah DF
Barcelona oo Ronaldo si dadban u qaniintey & Juventus oo siisay jawaab basbaas leh (Arag qoraalka)
DEG DEG: Nin qudha ka jaray dad ku jirey kaniisadda ugu wayn magaalada Nice & sida ay wax u dheceen + Muuqaal